တရားဥပဒေ စိုးမိုးမူ မဲ့နေသော မောင်တောတွင် ညဉ့်တွင် အခြေအနေ ပိုဆိုးနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » တရားဥပဒေ စိုးမိုးမူ မဲ့နေသော မောင်တောတွင် ညဉ့်တွင် အခြေအနေ ပိုဆိုးနိုင်
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမူ မဲ့နေသော မောင်တောတွင် ညဉ့်တွင် အခြေအနေ ပိုဆိုးနိုင်
Posted by thihayarzar on Jun 8, 2012 in Members, News | 14 comments
တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမူ မဲ့နေပြီ ဖြစ်သော မောင်တောတွင် ညဉ့်ကာလတွင် အခြေအနေ အထူးဆိုးရွားနိုင်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ယခုအခါ အခြေအနေကို အာဏာပိုင်များက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း မောင်တောက လာသော သတင်များတွင် ဖေါ်ပြသည်။
ဗိုလ်မှူးရွာမှ ရခိုင်အိမ် ၃၀ ခန့် မီးရှို့ခံရပြီး လူများလည်း သေဆုံးမူ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာ ခင်မောင်လှ လင်မယား ဓါးခုတ်ခံရပြီး မိန်းမ ဖြစ်သူ သေဆုံးသွားပြိဆိုသော သတင်းလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ရဲကို ဖုံးဆက်မရသဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ယခုအခါ မောင်တော တယ်လီဖုံးလိုင်းများအား ဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ လက်ကိုင်ဖုံးများကိုသာ အသုံးပြုနေကြရသည်ဟု သိရသည်။ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ အများစု တယ်လီဖုံးများမှာလည်း ယခုအခါ ခေါ်၍ မရတော့သဖြင့် မောင်တောမှ နောက်ဆုံး အခြေအနေ မည်သို့ ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသည်။
ကိုယ်ချင်းစာကြည့်မရလောက်အောင် ဆိုးလှတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေပါလား ….
မောင်တောနေ ရခိုင်များအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေလည်း မကူညီနိုင်တော့ဘူးတဲ့လား…
မိုးနတ်မင်းကြီးဗျာ.. ကြည့်မနေပါနဲ့… ။
ကုလားတွေ အမြစ်ပြုတ်ပါစေ။ ဒေါသထွက် လွန်းလို့အသားတောင်တုန်တယ်။
အာဏာနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်နေကျလဲ။ ဒီကိစ္စကို အမြန်ဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကျပါဗျုို့။
ဟုတ်တယ်။ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာလာစော်ကားနေတာ။ အားလုံးကိုကယ်တင်
ပေးပါ ဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးပါ။ ဘင်္ဂလီများ ကျရှူံးပါစေ၊ အပြုတ်တိုက်ထုတ်ပစ်ပါ။ မုန်းတယ် စိတ်တိုတယ် ဒေါသထွက်တယ်။
ဗမာနိုင်ငံ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ၊
အပေါက်စောင့်ရဲမှအစ သမ္မတအထိပါ၊ ထွက်ဆိုဘယ်သူမှမထွက်ချင်ကြဘူး။
တိုင်းမှူးကအောက်ခြေခြစားမှာစိုးလို့ စည်းကမ်းမဲ့လူတွေ ကားတွေ၊ (၂လုံး)ထီတွေဖမ်းကြ၊ မဖမ်းနိုင်ရင်ထွက် ဆိုတော့၊(လမ်းကြောင်းမရှိတဲ့) ဘု့မသိဘမသိသူတွေ ထောင်ထဲရောက်ကုန်ရော၊ ယူနီဖေါင်းဝတ်ပြီးတာနဲ့ တာဝန်အရဆိုပြီး ဥပဒေပုဒ်မတွေတပ်တော့တာဘဲ၊
သမ္မတကြီးက ဥပဒေဆိုတာ ဘယ်သူ့အပေါ်မှမရှိဘူးတဲ့ ဒီလိုဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတာဝန်မဲ့မူ့နှင့် အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်ကို တိုင်းမှူးရေဖမ်းဗျာ၊မဖမ်းနိုင်ရင်ထွက်……….
ရှေ့မမှီ နှောက်မမှီ မြန်မာပြည်၊ ရှေ့မသိ နှောက်မသိ နေရာချစ်၊ တောင်မြောက်ဘယ်မှာ မသိပါများ၊
ရခိုင်တိုင်းရင်သားများနှင့် အပြစ်မဲ့သူ အားလုံး
ကုလားတွေကို ရခိုင်မြေမှာ လက်ခံထားတာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို သတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး..
မင်းတို့တတွေ နေစရာမြေမရှိလို့ လက်ခံထားတာ..အဲဒီကျေးဇူးတွေကို ရခိုင်တွေကို
သတ်ပြီး ပြန်ဆပ်ကြပြီပေါ့..တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ အဲဒီကုလားတွေကို နယ်စပ်တစ်နေ
ရာမှာ ဒုက္ခသည် စခန်းဖွင့်ပြီး ကုလားတွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေနှင့် မရောစေပဲ စုထားသင့်ပါတယ်…
သူတို့တွေဘာဖြစ်ချင်နေတယ်၊ဘာလိုချင်နေသလဲဆိုတာ ကျုပ်တို့အားလုံးသိပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို စော်ကားလိုက်တာပါပဲ။
ကျုပ်တို့မြေမှာနေတယ်။ကျုပ်တို့ရေက်ိုသောက်တယ်။ကျုပ်တို့ထ္မင်းကိုစားတယ်။ကျုပ်တို့နှမသားချင်းတွေကို စော်ကားတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ ရတနာကို ပြစ်မှားတယ်။
ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပြီ။ အားလုံးအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် အကြီင်္း ကြီးတွေမဖြစ်ချင်ရင်။
မကျေနပ်ဘူး ဒီကောင်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန် စီရင်သင့်တယ်
What is the Minister of Home Affair doing. It is so late to take the action. Police battalions must send to save our nationals urgently.